ukuncibilika kwesikhumba se-aluminium umshini wokufaka umshini wokushisa | izixazululo zokushisa zokungeniswa
I-Aluminium Scrap Melting Recycling Induction Furniture
I-200 ephezulu ye-1500 ^ XNUMXkg Induction Aluminium Scrap Melting kabusha Induction Ifenisha yokuphinda isebenze kabusha nokuncibilikisa izilahla ze-aluminium, izingotshi, amathini nezinto ezibonakalayo.
I-aluminium scraps / ingots / amathini aphinde avuselele isithandani somlilo uyobeka izingxenye ze-aluminium noma i-aluminium ingot / isikhumba njengendlela yokukhokhiswa kwe-aluminum i-aluminum i-aluminum kanye nokuqala isithando somlilo ukuqala inqubo yokuqubuka. Ukwengeza i-aluminium ngaphezulu ukukhokha le nqubo kuphakanyiswa ukuthi i-aluminium encibilikisiwe idlulisa ukushisa kangcono.
Lapho ukushisa kwe-aluminium kufinyelela ku-1220.66 ° F kuyaguquka. Noma yikuphi okusalayo okuvela kwengubo nokupenda kusuka kwamathini kuzokhamuluka phezulu. Le nqubo ibizwa ngokuthi i-dross futhi ingahle ihlolwe yi-ladle yensimbi. Lokhu kudinga ukupholisa ngaphambi kokuba ilahlwe ngokuphepha.
Okulandelayo, i-crucible (isithando somlilo) izothululela i-aluminium ehlanzekile. Ngokuvamisekile, indlela yokuguqula i-hydraulic ehlinzekwa ukuthulula inqwaba yezinsimbi zamanzi.
Okokugcina, ngokunakekelwa, i-aluminium encibilikisiwe izoshulwa ibe isikhunta ukuze ipholile phansi bese isilahla ukuze isetshenziswe.
AIzinzuzo ze-Aluminium Scrap Melting Recycling Induction Furnace:
I-1, gcina amandla futhi unciphise ukushisa kwemvelo
I-workshop yokuqala ye-diesel yocingo lokungcola, kodwa futhi iphayiphi yendiza yokusiza, ngaphakathi nangaphandle kokushisa kwesithando kunesamba esikhulu sokusatshalaliswa emhlanganweni, okuholela ekufundeni okushisa okuphezulu. Ngakho-ke isimo sesithando sokuqala somlilo, iningi lokuphunyuka emoyeni, kukhona ukulahlekelwa kokushisa, ukukhiqizwa kwamandla amakhulu, ukwandisa izindleko zokukhiqiza. Ngesikhathi esifanayo, izinga lokushisa eliphansi liyakhula. Inqubo yokushisa yokufakelwa kwamandla kagesi, i-thermal element iyashisa ngokushisa komhlaba, ukuze kuncishiswe ukulahlekelwa kokushisa, ukushisa okusheshayo, ukuqubuka ngokushesha, ngaleyo ndlela kuncishiswe ukusetshenziswa kwamandla. Nciphisa ukusetshenziswa kwegesi. Ngemva kokuqhathaniswa kokuhlolwa kokuhlolwa nokuguqulwa, umphumela wokulondoloza amandla ngu-20% -40%.
2, Ukushisa okusheshayo, ukushisa lokushisa okunembile kwangempela-isikhathi
Ukushisa kwe-electromagnetic induction Indlela iwusebenzisa imigqa yamagnetic field yenza ukushisa okusheshayo okusheshayo, i-aluminium esebenza ngokusheshayo. Ukulawula izinga lokushisa kuyisikhathi sangempela futhi sinembile, okuthuthukisa ikhwalithi yomkhiqizo futhi kuthuthukise ukusebenza kahle!
I-3 nokuphila kwesikhathi eside, ukugcinwa okulula
Ukushisa komshini wokufakelwa kwesithando somlilo ukusetshenziselwa ukushisa indlela yokushisa ukusebenzisa ukushayela ucingo, ukumisa ucingo endaweni yokushisa ephakeme isikhathi eside ekusetshenzisweni kwe-oxydation kuyoholela ekunciphiseni impilo yayo yokusebenza, izindleko zokugcina eziphezulu. I-coil yokushisa kagesi yenziwe ngamagesi okushisa nokushisa okuphezulu, ngakho-ke impilo yokusebenza iyinde futhi ingenasondlo.
Ukushisa kwe-electromagnetic ukukhishwa kwentuthuko nokuthuthukiswa nokukhula kobuchwepheshe, inqubo yokukhiqiza kanye nobuchwepheshe bezingxenye, isofthiwe, njengokuvikelwa okuthembekile kwamandla wamanje kungaba yi-2-200KW.
I-model model isebenzisa ukushisa kwe-electromagnetic induction, okuyinto enganciphisa izinga lokushisa lomshini womshini, futhi umzimba womuntu ungathinteka ngokuphepha, ukuze ugweme ukuvela kwezingozi zokushisa nokukhipha ngenxa yendlela yokushisa yendabuko futhi uvikele ukuphepha kokukhiqiza kwabasebenzi.
Ukonga amandla angu-1 nokuvikelwa kwemvelo, amadivayisi kagesi we-IGBT aseJalimane, ukuthembeka okuphezulu, ukusebenza okuzinzile nezindleko zokugcina eziphansi.
I-2) imvamisa yesigaba sedijithali esivinjelwe ukulandelela i-loop, ukulinganisa okuzenzakalelayo kwempedance yemedance.
Ukulawulwa kwe-3 amandla okuvala-loop, ukugwema ushintsho lokushisa olubangelwa amandla phansi.
I-4) ngaphezu kwamandla, ngaphansi kwe-voltage, ukuntuleka kwesigaba, phezu kwamanje, ngaphezu kokuvikela ukushisa, ukubonisa isikhathi sangempela kwemingcele, ukuxilongwa kwephutha kanye ne-alamu; ukuvuza i-alamu e-othomathikhi, unqume ukunikezwa kwamandla kanye nesimo sokusebenza sokubonisa isikhathi sangempela.
I-5) Uhlelo lokulawula ukushisa kwe-PID, ukushisa okushisa okufanayo, kuvimbela ukushisa kwe-aluminium encibilikile, ukushisa kancane, izingxenye zensimbi ezihambisanayo ukuze kuthuthukiswe izinga lokuqeqeshwa komkhiqizo.
I-6 (LED) isilawuli sezinga lokushisa lokudijithali, ukulinganisa nokulawula ukunemba okushisa okufika ku-3 degrees centigrade, ikhwalithi ye-aluminium isobho ihle, ukushisa okuqhakazile kuphakama ngokushesha, ukushisa kwesithando kulula ukulawula, ukukhiqiza ukusebenza kahle kuphezulu;
I-7) isakhiwo esiyi-polycrystalline mullite fiber yesithando somlilo, ivolumu encane, impahla ehlelekile yokuqapha, ukusetshenziswa kwamandla aphansi, ukusebenza kahle, izinga lokushisa ngaphezu kwama-1200 degrees, impilo yesikhathi eside;
I-8. Ukusebenza kulula futhi amandla angalungiswa nomsebenzi;
Ubude be-9 (100%), amandla amakhulu, ukuqinisekisa ukusebenza kwamahora we-24.
Umthamo wokuncibilikisa we-SMJD yochungechunge lwe-Aluminium Scrap Melting Recycling Induction Isingeniso:
Uhlobo Power Input Ukuxuba amandla Ukushisa okuphezulu
insimbi, insimbi engagqwali ithusi, igolide, isiliva (i-scrap, i-Slag) aluminium, aluminium alloy,
Aluminium scrap, Aluminium slag, pop kungaba
I-SMJD-463 I-60 KW 200 KG 500 KG 200 KG
I-SMJD-480 I-60 KW 150 KG 500 KG 150 KG
I-SMJD-580 I-80 KW 200 KG 600 KG 200 KG
I-SMJD-600 I-60 KW 230 KG 560 KG 230 KG
I-SMJD-900 I-120 KW 300 KG 900 KG 300 KG
I-SMJD-905 I-80 KW 300 KG 900 KG 300 KG
I-SMJD-1250 I-80 KW 400 KG 1200 KG 400 KG
I-SMJD-1250 I-120 KW 450 KG 1350 KG 450 KG
I-SMJD-1500 I-120 KW 500 KG 1500 KG 500 KG
I-SMJD-1550 I-120 KW 520 KG 1560 KG 520 KG
I-SMJD-1700 160KW 600 KG 1700 KG 600 KG
I-SMJD-2300 160KW 800 KG 2000 KG 800 KG
I-SMJD-3100 200KW 1200 KG 3000 KG 1200 KG
[pdf-embedder url = "https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2018/10/SMJD-melting-aluminum-furnace-parameter.pdf" title = "SMJD melting aluminium furnace parameter"]
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi i-aluminium isikulufa sikagesi, aluminium esithandweni somlilo, aluminium scrap induction somlilo, ukushibilika kwe-aluminium, i-aluminium isikulufa sokuncibilikisa isithando somlilo, I-Aluminium Scrap Melting Recycling Induction Furniture, i-aluminium isikulufa sokuphinda sisebenzise isithando somlilo
i-aluminium isikulufa sokuncibilikisa isithando somlilo
Isithando somlilo esingaphezulu esingu-200 ^ 2000kg se-aluminium esincibilikisayo sokusakaza nokuncibilikisa izigaxa ze-aluminium, ama-ingots, amathini nezinto zodaka. Izinyathelo Zokusebenza: I-Aluminium melting induction furnace opharetha izobeka izingxenye ze-aluminium noma i-aluminium ingot / isilahla njengokukhokhiswa ku-induction encibilikisa isithando somlilo se-aluminium bese iqala isithando somlilo ukuqala inqubo yokuncibilika. Ingeza ukukhokhisa okungaphezulu kwe-aluminium… Funda kabanzi
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi I-aluminium encibilikisa isithando somlilo, ukushibilika kwe-aluminium, i-aluminium isikulufa sokuncibilikisa isithando somlilo, umshini wokuncibilikisa we-aluminium, ukushibilika kwe-aluminium, indwangu ye-Aluminium yokuncibilikisa